Fametrahana zavakanto + singa voajanahary, mitaona sary an-tsaina tsy manam-petra momba ny ho avy | DESIGN MACONWAY - Faucets dakozia tsara indrindra 2020 | Faucets an-dakozia tsara indrindra | Faucet ao an-dakozia
Home / Interior design / Fametrahana zavakanto + singa voajanahary, mitaona sary an-tsaina tsy manam-petra momba ny ho avy | DESIGN MACONWAY
2021 / 08 / 15 FisokajianaInterior design 2340 0
Developer Atitany Design Alliance
Sary sokitra mety amin'ny habaka
mitombo voajanahary, lojika ary poetika amin'ny tontolo iainany.
Tianheng Bayview Garden dia miorina amin'ny toerana sarobidy indrindra amin'ny Zhuhai - Tangjia Peninsula. Izy no mitazona ny faritry ny tany farany manatrika ny ranomasina amin'ity faritra ity: tohanan'ny havoana maitso ary miatrika mivantana ny morontsiraka lava, tsy azo resena ny fomba fijery.
▲ sary maritrano anatiny
Miorina amin'ity tombony ara-jeografika ity, ny ekipa maritrano dia namorona dobo tsy manam-petra 108 metatra ambonin'ilay trano. Tsy ny lava indrindra eto an-tany ihany no manana ny rakitsoratra WRCA manerantany, fa koa mari-pamantarana vaovao any amin'ny Bay Bay amin'ny ho avy. Izy io dia manana ny dikany estetika amin'ny "riandrano miampita manerana ny rano".
Mikasika ny fo
Ny atitany dia ampahany voajanahary amin'ny trano, fa koa ny fanitarana sy fanitarana ny trano amin'ny haavon'ny micro. Ny tanjon'ny tetik'asa amin'ity tetikasa ity dia ny hamerina ny lafiny maritime amin'ny tontolo voajanahary tsy manam-paharoa Zhuhai, ary hiasa ho tetezana eo anelanelan'ny ati-trano sy ivelany. Io dia ahafahan'ny tontolo voajanahary, ny maritrano, ny tontolo ary ny endrika anatiny hamolavola amin'ny fomba mirindra ny fifanakalozan-kevitra izay miverina ary mitohy.
Noho izany, ny atitany dia manohy ny lojika amin'ny fiainana ny natiora sy ny maritrano, aingam-panahy avy amin'ny chiaroscuro ny tontolo iainana ankapobeny. Io dia mamela ny fivelaran'ny arkitiva hikoriana malalaka sy mihombo ao anaty, ary miditra lalina amin'ny endrika feno sy mavitrika, mamorona ny heriny manokana sy ny heriny anatiny ho endrika mikoriana tsy manam-paharoa, mitarika amin'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny habakabaka sy ny olona. .
Ny famolavolana dia ny fihenan'ny zavakanto, fa miorina amin'ny ankehitriny ihany koa
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tontolo voajanaharin'ny tetikasa - ny ranomasina - ary miorina amin'ny fomba fiainana ankehitriny, ny endrika dia mampifangaro ny eritreritra tsara amin'ny ho avy. Ny fomba famolavolana futuristic dia manolotra ny gadona sy ny herin'ny ranomasina. Indraindray dia kanto sy mangina izy io, fa mikorontana kosa indraindray. Ny fifandonana amin'ny zavakanto fametrahana sy singa voajanahary dia adika indray ary atambatra mba hanehoana fomba fiaina feno eritreritra amin'ny ho avy.
Ny mpamorona dia mila mitarika sy manazava ny fiainana tsara tarehy amin'ny ho avy. Ny habaka anatiny dia manohy ny fahatsaran'ny haitao ara-teknolojian'ny maritrano mba hahafahany mamorona fifanakalozan-kevitra amin'ny lohahevitra miompana sy mirindra amin'ny tetikasa. Ny mpamorona Andriamatoa Ma Conway, amin'ny maha manam-pahaizana amerikanina maitso (LEED AP), dia nanohana hatrany ny hevitra momba ny fananganana maitso. Eo ambanin'ny borosiny, ny hery anaty tsy hita maso amin'ny fiainana voajanahary dia ny fanahin'ny habakabaka.
Miditra ny atitany dia nosokafana ny gadon-dranomasina hatramin'ny fotoana nidiranao tao amin'ny faritra fandraisana ny latabatra. Ny fahatsapana ny habetsahan'ny hery sy ny tondra-droa dia mametraka ny sahan'ny hery sy ny feon'ny habakabaka, ka mamelabelatra ny hery anaty tsy hita maso amin'ny fiainana voajanahary.
Ny endrika sary sokitra dia manomboka amin'ny tany ary avy eo mihodina ary maniry hatramin'ny valindrihana. Izy io dia manome ny gadon'ilay atitany, raha ny fitaovana ho an'ny perla dia voafidy ho an'ny rindrina any ambadiky ny tany, miaraka amin'ny fandikana ny fahadiovana sy ny fahalalahan'ny ranomasina, dia mitohy ary manapaka ny fetran'ny faritra ara-batana.
Any an-dranomasina: ny famolavolana dia ny fihenan'ny zavakanto, fa miorina amin'ny ankehitriny ihany koa
Ity famolavolana ity dia toy ny fanadihadiana momba ny sambo. Ny tetik'asa dia mizara ho faritra miasa lehibe, anisan'izany ny fandraisana (dia toy ny lakana lakana eo afovoan'ny ranomasina), ny faritra fampirantiana fasika (izay ivorian'ny onjan-dranomasina ao anaty onja), ny faritra ifampiraharahana afovoany. (amin'ny tsiro fiainana yacht avo lenta, ankafizo ny kanto sy ny mangina, ny gadon-dranomasina), ary ny faritra fifampiraharahana am-baravarankely (ao amin'ny habakabaky ny tokana yacht, ankafizo ny manodidina sy ny fihinanan'ny ranomasina. Ary ny 108 -ny riandrano metatra ivelan'ny varavarankely dia manitatra ny vokany toy izany).
Miatrika ny ranomasina ny tetikasa, ary ny fikasana voalohany indrindra ny famolavolana dia ny fanehoana ny fahalalahana sy ny tantaram-pitiavana tsy voafehy. Mila ny foto-kevitry ny "yacht" ny famelana ny fahalalahana sy ny tsy voafehy hiseho amin'ny fihetsika kanto sy avo lenta. Ny herin'ny fiainana kolokoloina avy amin'ny natiora voajanahary, eo ambanin'ny borosin'ny mpamorona, ny filaminana ary ny fotoana dia manafoana ny fetra. Ny habaka ankapobeny dia manolotra fihetsika misokatra, manatan-tena ary mahery.
Ny faritry ny boaty fasika dia amin'izao fotoana izao manintona, miaraka amin'ny valindrihana miitatra midina amin'ny endrika ranomaso. Io no teboka ifantohana iombonan'ny maha-zava-dehibe ny habakabaka sy hahatonga ny zavakanto ho lasibatra kokoa.
Ny endrika dia manako ny endrika maritrano ary mifangaro amin'ny natiora sy ny ranomasina. Miaraka amin'ny fihenan'ny onja, ny ranomasina dia mikoriana mankany afovoan-tany. Eo anelanelan'ny sosona manintona sy azo eritreretina, dia misy fiadanam-po mahafinaritra, mampiseho ny hakantony voajanahary nefa tsy very ny fomba lamaody avant-garde.
Jiro amin'ny hazavana: ny fanahin'ny habakabaka
Ny mpamorona Ma Kangwei dia naniry ny hampisehoan'ny futurism teknolojia ny tetikasa. Ny teny hoe "ho avy" dia matetika manome toerana ho an'ny olona sary an-tsaina.
Ny habaka iray manontolo dia toy ny rano mikoriana maimaimpoana nefa mahery, mihodina ary mamolavola endrika tsara tarehy. Ny porofo tsara indrindra momba izany dia ny valindrihana tsy miova. Mampiseho ireo gadona samihafa ateraky ny fihaonana eo amin'ny ranomasina sy ny hazavana, toy ny onja mikarantsana, onja mahery, na mankafy mangina ny filentehan'ny masoandro. Amin'ny faritra fifampiraharahana dia somary antonony kokoa sy mafana kokoa ity hetsika ity.
Ho fanampin'ny sary an-tsaina tantaram-pitiavana an-dranomasina, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana ary ny teknolojia koa no fototry ny eritreritra. Ny fisehosehoana misokatra sy mavitrika amin'ny planina habakabaka dia mamorona traikefa mangarahara sy maharitra.
Ny teknolojia dia tafiditra ao amin'ny habakabaka amin'ny fomba tena hendry - kianja elektronika tsy tambo isaina no mamorona valindrihana. Ny firafitra nomerika dia mamorona ny gadona onja tsy miovaova. Eo anelanelan'ny onja, ny vatana mamirapiratra tsirairay dia nopetahany fantson'ny kristaly, manome ny hazavana sy ny zavakanto bebe kokoa.
Eto ny endrika dia sary an-tsaina eritreritra fa tsy teknika. Ny valindrihana dia tsy miova, mitohy amin'ny haitao, ny maritrano ary koa ny sary sokitra. Tsy fametrahana zava-kanto fotsiny izy io, fa koa fitaovana hampitana sy hamoahana ireo fihetseham-po tsy manam-petra sy tsy misy fetra ary faniriana ankamamiana ao am-po, momba ny zavakanto sy ny fiainana.
“Mampiasa ny fomba spatial an'ny maritrano izahay mba hamoronana jiro zavakanto fametrahana valindrihana, famoronana gadona ny ranomasina, ary atambatra amin'ireo loharanom-pahazavana miovaova loko, na ny tantaran'ny filentehan'ny masoandro. Na ny lanitra na ny ranomasina, dia manantena izahay fa hampita fihetseham-po samy hafa amin'ny firafitra anatiny. ” Hoy ny mpamorona.
Feno hazavana, loko, kalitao ary tsiro ny habaka. Rehefa miposaka ny masoandro ka milentika dia milatsaka moramora ilay hazavana mangina. Mandeha ny fotoana, indraindray mahery, maivana indraindray. Izy io dia tantaram-pitiavana tsy manam-petra sy feno fofonaina izay mifanaraka amin'ny fon'ny olombelona. Hatreto, ny fiolahana, valindrihana, 108 metatra amin'ny ridao rano, fikorianana voajanahary, indray mandeha.
Manao onja: miloko, lalina, mampihetsi-po
Raha ny tohatra miolikolika no filan'ny onja, ny efitrano fitsangatsanganana dia toy ny riaky ny ranomasina malefaka aorian'ny onja lehibe.
Ny fiolahana malefaka sy voajanahary dia mihazakazaka manerana, mamorona faritra hipetrahana miaraka amin'ny poezia malefaka amin'ny rano. Tiffany manga dia tototry eo anelanelany mba hamoronana ny tantaram-pitiavana amin'ny ranomasina. Ny kalitaon'ny filan'ny habaka dia ahetsika eto, miseho milamina sy mikoriana.
Fanandramana dite: miverina amin'ny loharano voalohany
Liang Qiushi nilaza indray mandeha, "Na aiza na aiza misy ny Sinoa, dia misy dite". Ny dite iray, izao tontolo izao, dia tononkalon'ny fiainana an'ny vahoaka sinoa, ka misy efitrano dite manokana natsangana amin'ity tranga ity. Ny antsasaky ny kanto, afomanga afovoany ary ny fanindronana ny estetika maoderina no tena farany.
Ny faritra iray manontolo dia natao ho tsotra sy mahitsy, miaraka amin'ny natiora dite. Tsipika maranitra, volavolan-dalàna madio, hazo mafana, fotsy madio, miaraka daholo ireo fitambarana ireo, esory ny saina sy hivoaka amin'ny latabatra vovoka.
Ity toerana ity dia feno hery malefaka, malama sy malalaka. Izy io dia mitondra fluidity sy fitarihana miharihary amin'ny habakabaka, ary mitarika ny fahitana sy ny fitondran-tena. Manitatra eto ny dinamika sy ny fihenjanana.
Ny fametrahana zavakanto amin'ny rindrina aoriana dia vita amin'ny sosona tendrombohitra mifampiorina. Miankina amin'ireo havoana maitso ary miatrika ny ranomasina, vao mainka mahazo aina sy miala sasatra izy.
Ao amin'ny Tianheng Bayview Garden, taorian'ny niainany ny dia yacht tany an-dranomasina, ny fananana dite kaopy sy nankafizanao ny fitokanana no tena nampitony ny fo.
Ary farany, hoy i Ma Kangwei: “Mandrakitra ireo tantara izay miseho amin'ny fotoana sy habaka samihafa izahay mandritra ny dia an'ity dia an-dranomasina ity amin'ny alàlan'ny famolavolana. Ireo singa famolavolana rehetra ao dia mitantara zavatra tsy miova. ”
Anaran'ny tetikasa: Zhuhai Tianheng Bayview Garden Sales Center
Adiresin'ny tetikasa: No. 63, Peninsula Six Road, Distrikan'i Xiangzhou, Zhuhai, Faritanin'i Guangdong
Faritra tetik'asa: 1100 metatra toradroa
Famolavolana arsitrafitra anatiny: Birao famolavolana drafitra KDI New York
Famolavolana maritrano: DLN ARCHITECTS LIMITED (HONG KONG)
Mpakasary sary: ​​Dou Time Architectural Space Photography
KDI Conway Design New York ｜ Mpanorina
Previous :: Proposition kanto sy manankarena, mamolavola toerana onenana an-tanàn-dehibe | Drafitra SRDP Next: Ny tranon'ny distrikan'ny sekoly dia mamaky ny "taloha sy efa rava" ary mamerina ny kalitaon'ny fiainana Design endrika Shuangbao